မြန်မာရာဇဝင်လာ သမိုင်းဝင် အိန္ဒိယလူမျိုးများ (၂) | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« မြန်မာရာဇဝင်လာ သမိုင်းဝင် အိန္ဒိယလူမျိုးများ (၁)
(စာညွှန်း ရှေးဟောင်းပျူများ – စာမျက်နှာ (၃ နှင့် ၄)၊ ပါမောက္ခဦးသန်းထွန်း)
မြန်မာ(ဗမာ) လူမျိုးတို့မှာ ပျူ၊ ကမ်းရံ၊ သက် လူမျိုးတို့ပေါင်းစပ်၍ ဖြစ်ပေါ်လာပြီး ပျူတို့မှာ အင်အားအကောင်းဆုံးနှင့် အဓိက အကျဆုံး လူမျိုးဖြစ်သည်။
ပျူများသည်ပင် အခြေခံလူမျိုး(၃)စုမှ ပေါင်းစပ်ဖြစ်ပေါ်ခြင်း ဖြစ်၏။
(၁) ရှေးဦးလူသားအခြေခံ ပျူများမှာ – ကျောက်ခေတ်၊ ကြေးခေတ် နှင့် သံခေတ်မှ စ၍ အစဉ်အဆက် မြန်မာပြည်တွင် နေထိုင်ခဲ့ကြသူများ။
(၂) အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ရွှေ့ပြောင်းအခြေချလာသော ပျူများ၊ သူတို့က ဟိန္ဒူနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ သာမက ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဓလေ့ပါသယ်ဆောင်လာသူများ ဖြစ်သည်။
(၃) မြောက်ဘက်မှဆင်းလာသော တိဘက် မြန်မာအနွယ်ဝင်ပျူများ။
ပျူများသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း၌ ဘီစီ(၁၀၀)ခန့် သို့မဟုတ် ၎င်းအလျင်ကပင် အခြေချ နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ဟန်လင်း ကွတ်ခိုင်၊ သံလွင်မြစ်ကမ်း၊ အရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်း၊ မုတ္တမပင်လယ်ကွေ့၊ သံတွဲနှင့် ရိုးမဒေသတို့တွင် စတင်အခြေချကြသည်။
(စာညွှန်း- ပါမောက္ခဦးသန်းထွန်း မြန်မာရာဇဝင်ရုပ်ပြစာအုပ်)
ပျူတို့သည် သရေခေတ္တရာ (ပြည်)၌ အေဒီ ၄-၈ ရာစု၊ မိုင်းမော် ဗိတ္တနိုး (အမှန်က ဗစ်ရှနူးခေါ် ဟိန္ဒူ ဘုရားအမည်) (ခမာများက အေဒီ ၂၁၀-၂၂၅သိမ်)၊ တောင်တွင်းကြီး အေဒီ ၁-၄ ရာစု၊ ဟန်လင်း (ဝက်လက်) အေဒီ ၁-၄ ရာစု၊ ဟန်လင်းကြီး တကောင်း (သပိတ်ကျင်း)၊ waddi (နွားထိုးကြီး)၊ မိုင်းမော်၊ မြစ်သား၊ ဘိန္နက (ပျော်ဘွယ်)နှင့် ဘီးလင်း (မွန်ပြည်နယ်) တို့၌ အခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြသည်။
အိန္ဒိယ ဂွပ္ပတား (Gupta) မူကွဲ ပျူစာ
ပျူကျောက်စာများကို ပါဠိနှင့် ဂွပ္ပတား မူကွဲ ပျူစာများဖြင့် ရေးသားထားပါသည်။ ပျူများအကြောင်းကို တရုတ်ခရီးသည်နှင့် ကုန်သည်များ၏ ကြေငြာချက်ဟူ၍ တရုတ်ရာဇဝင်များ၌ ရေးသားမှတ်တမ်း တင်ထားပါသည်။
ခမာများက အေဒီ ၂၁၀-၂၂၅တွင် ပျက်စီးပြီး မွန်များဝင်လာပြီး ပန်ထွာနှင့် ရာမညမြို့ အဖြစ် ထူထောင်သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ဟိန္ဒူဘာသာ ကိုးကွယ်ကြသည်။ ဗုဒ္ဓရုပ်တုတော်များနှင့် ဂွပ္ပတား (အိန္ဒိယ)ဟန် ဟိန္ဒူဘုရားရုပ်တု မျိုးစုံကို တွေ့ရှိရသည်။
တရုတ်ရာဇဝင်မှတ်တမ်းများ၌ ပျူများကို “P’ aio” ပအိုဟု မှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။ သို့သော် ပျူတို့ကမူ သူတို့ကိုယ်သူတို့ Tricul တီကျူးဟု သမုတ်ပါသည်။ တရုတ်ရာဇဝင်၌ နန်ချိုရှမ်းတရုတ်များနှင့် တိဘက် ပူးပေါင်း၍ တရုတ်ကို တိုက်ခိုက်ခြင်း မှတ်တမ်းများ တွေ့ရပါသည်။ နန်ချိုရှမ်းတရုတ်ဘုရင် Ko-lo-fan ကိုလိုဖင်၏ ပျူများနှင့် ဆက်သွယ်သော မှတ်တမ်းများလည်း တွေ့ရပါသည်။ ပျူဘုရင်များကို မဟာရာဂျာများ၊ မှူးမတ်ချုပ်များကို MAHSINAS မဟာဒီနားဟု မှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။
ပျူဘုရင်များ VISNU (ဗစ်ရှနူး)ဘွဲ့ ကို အိန္ဒိယ ဂွပ္ပတား (Gupta) ဓလေ့အရ ယူခြင်း
တောင်ပိုင်း အိန္ဒိယ အက္ခရာသုံး၍ မှတ်တမ်းတင်ထားသော ပျူကျောက်စာများ၌ ဗစ်ရာမ (VIKRAM) မင်းဆက်က အေဒီ ၆၇၃မှ ၇၁၈အထိ စိုးစံခဲ့ကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။
(စာညွှန်း Burma, D.G.E.HALL MA D.LIT, F.R.HIST. Professor Emeritus of the University of London and Former Professor of History, Rangoon, Burma 3rd. Eddition 1960 Page 8.)
ထိုကျောက်စာများ၌ ဗစ်ရာမနောက်မှ ဗစ်ရှနူး (ဟိန္ဒူဘုရား) အမည်များကို တွဲဖက် ဖော်ပြလေ့ ရှိကြသည်။
ဗစ်ရှနူး (ဟိန္ဒူနတ်ဘုရား)က ဂရုဒါ (GARUDA) ခေါ် ဂဠုန်ငှက်ပေါ်၌ မတ်တပ်ရပ်နေပြီး လက်ရှမီး (LAKSHMI ဟိန္ဒူနတ်ဘုရားမ) က ကြာပန်းပေါ်၌ ရပ်နေသော ရုပ်တုများနှင့် ဘရာမာ (BRAHMA ဟိန္ဒူနတ်ဘုရား)၊ ရှီဗာ (SIVA)နှင့် ဗစ်ရှနူး ပလ္လင်များ ကို မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ပျူတူးဖေါ်ရာ၌ တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။
ထို့ပြင် ဗာမင် (VAMAN)ဘုရင်မင်းဆက် ရှိခဲ့ပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံ ပလာဗာ (PALAVA)မင်းဆက်၏ လွှမ်းမိုးမှု မကင်းကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
(စာညွှန်း Elizabeth Moore, Myanmar Historical Research Journal (2004))
ပန်ထွာရှိ အိန္ဒိယ (DRAVIDIAN) ဒြာဗီဒီယန်နွယ်များ
တရုတ်ရာဇဝင် ချန်ယိစိန်၌ မုတ္တမပင်လယ်ကမ်းခြေ မွန်ဌာနေ၌ ဒြာဗီဒီယန် အိန္ဒိယနွယ်ဖွားများ အခြေချ နေထိုင်ခဲ့ကြောင်း မှတ်တမ်း ပါရှိသည်။
၎င်းတို့သည် ဗိဿနိုးကို ဝင်ရောက်လွှမ်းမိုးပြီး ပန်ထွာအဖြစ် အမည်ပြောင်း တွင်စေခဲ့သည်။ ထိုမှတဖန် ရာမညပူရအဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
(စာညွှန်း D G E HALL “BURMA”)
တကောင်းမှာ ဒွတ္တဘောင်၏ မိဘတို့ ပါဝင်သော ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်၌ ယှက်နွယ်နေသည့် ဗိဿနိုး ဘုရင်မကြီးနှင့် ဆက်သွယ်မှုမှာ အထောက်အထား မခိုင်လုံလှပေ။ သို့သော် သရေခေတ္တရာ အုပ်ချုပ်သော မင်းများနှင့်မူ ဆက်နွယ်နေ၏။ အဓိကအားဖြင့် ဟိန္ဒူဘုရင်များ၏ အရိုက်အရာ ဆက်နွယ်မှု၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဂိုဏ်းကွဲများ လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဒဏ္ဍာရီဆန်သော အဖြစ်များ ရောမွှေထားသော သမိုင်းကြောင်း ဖြစ်နေသည်။
4 Responses to “မြန်မာရာဇဝင်လာ သမိုင်းဝင် အိန္ဒိယလူမျိုးများ (၂)”